Isidlo sakusasa saseCampero, esiqhelekileyo kwiidolophana zaseAndalusia | Ukupheka kweKhitshi
Kwidolophu nganye kukho i-gastronomy yesiko apho isitya ngasinye sinencasa ekhethekileyo kwindawo leyo. Kungoko namhlanje ndikuzisele le nto; Isidlo sakusasa saseCampero Uhlobo oluqhelekileyo lweSierra de Cádiz apho iincasa ezifana neoyile ye-olive, i-serrano ham kunye ne-tomato ebomvu ibixubiwe.
Isidlo sakusasa sesona sidlo sibaluleke kakhulu sosuku, ke ngoko kufuneka bahambe nokutya okune-eneji ukumelana nakho konke ukuxakeka komsebenzi nokuzilolonga. Esi sidlo sakusasa kufuneka sikhatshwe yi Ukutya kweMeditera ukuze singagqithi kubunzima bethu.
Ukwenza esi sidlo sakusasa selali esiqhelekileyo, okokuqala kuya kufuneka sikwenze thenga imveliso. Ke ukuba unelungu losapho onokuthi uliphathise xa beze kutyelela okanye xa useluhambeni, thenga ezinye kwaye uzame le recipe eya kukunika umdla. Iifomfini ziqhelekile kwiidolophu kwaye, ke, kwizidlo zangokuhlwa.
Kuqala kufuneka senze i isosi okanye i-puree netumato. Kwiindawo ezininzi, le sauce iyimveliso ye-salmorejo yokugaya eyenzayo. Nangona kunjalo, kwezinye iidolophu, bafaka nje itumato ecoliweyo bayisike kwaye bayigaye ngetyuwa. Ukuba ufuna ukuyinika ukungqinelana ngakumbi ungongeza isonka esidala.
Emva koko, izilayi ze ham zibekwa phakathi kwamacwecwe amabini okubhaka afakwe zombini ngephepha elingenawo amafutha, ukuze zome kwaye zishiye crispy ham.
Ngoku, nazo zonke izithako zilungiselelwe, lixesha lokuba nyusa isitya. Siza kufudumeza i-muffin kwi-toaster okanye nge-iron. Ndiyayithanda bhetele kwi-griddle ukongeza kancinci izithako. Xa sibona ukuba i-muffin igolide ngandlela-thile kumacala omabini, siyivula embindini kwaye siya kuyibuyisela kwi-griddle kubushushu obuphantsi kakhulu.
Kwisiseko samanye amacandelo e-muffin sibeka i-oli yomnquma. Kule nto siza kubeka izilayi zenyama eyosiweyo, kule isosi encinci yetumato okanye isalmorejo kwaye, ekugqibeleni, isilayi setshizi. Siza kuyiyeka inyibilike kancinci, siyisuse kwipleyiti, sibeke elinye icandelo le-muffin ngaphezulu kunye ne-voila, ukonwabele oku isidlo sakusasa selizwe ngokwesiko.
Olunye ulwazi - uSalmorejo
Iikhilokholi ngokusebenza 268
Cuisine yesiNtu, IMontaditos
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yesiNtu » I-Campero, isidlo sakusasa esiqhelekileyo kwiidolophana zaseSierra de Cádiz
Amakhowa abhakwe ngelamuni kunye neethyme, ezenziwe kwimizuzu eli-15